Ihowuliseyili wokucoca Sanding kumatshini yoMvelisi kunye noMthengisi | Ukudibanisa
cambered ekhethekileyo-ezimilise umatshini wokucoca luhlobo olutsha olusebenzayo nolusebenzayo lomgangatho wokwenza izixhobo zomatshini Umatshini wamkela izixhobo eziphezulu zokungenisa ngaphakathi ukuphucula ngokupheleleyo ukuchaneka kwebhodi yeplanga, ngakumbi ukuchaneka kokucoca kuqala, okunconywa kakhulu abathengi abakumgangatho ophezulu.
1、cambered ekhethekileyo-ezimilise umatshini wokucoca luhlobo olutsha olusebenzayo nolusebenzayo lomgangatho wokwenza izixhobo zomatshini Umatshini wamkela izixhobo eziphezulu zokungenisa ngaphakathi ukuphucula ngokupheleleyo ukuchaneka kwebhodi yeplanga, ngakumbi ukuchaneka kokucoca kuqala, okunconywa kakhulu abathengi abakumgangatho ophezulu.
2、Lo matshini usetyenziselwa ngokukodwa iingcango zangaphakathi, iingcango zekhabinethi, ifanitshala kunye nezinye izixhobo zokucoca umphezulu ogobileyo. Njengolayini womnyango, isakhelo somnyango, isiseko sebhodi, isakhelo sesigaba, izitshixo, njl.njl. umphezulu ogobileyo.
3、Inokusetyenziswa okuguqukayo kwaye ilungele unyango lomphezulu njengokugaya i-primer kunye nokupholisha kunye nomququ omhlophe, isanti emhlophe engenanto kwiindawo ezahlukeneyo zebhodi kubandakanya ibhodi ecacileyo, ibhodi yokuthinta kunye nepeyinti yokuqala.
4、Isantya sokubaleka komatshini sinokuhlengahlengiswa, akukho ngxolo. mqengqeleki elide kunye mqengqeleki elide idiskhi yokudibanisa idibanisa yenza ukuba indawo yokugaya ifele-simahla.
Imigangatho emihlanu yebhanti yokuhambisa impahla ephezulu, ukusetyenziswa kwexesha elide akuyi kuvela kutenxa. Umsebenzi osebenzayo usebenzisa isitishi sensimbi ipleyiti yentsimbi ephezulu ngesixhobo sokutenxa ekuqaleni.
Isetyenziselwa ukugaya nkqo, kufanelekile ukulungiselela imijelo, ukukrola, i-lateral hollowing, kulula ukuyitshintsha
Isondo elithe tyaba
Isetyenziselwa ukugaya ibhodi yeplanga
Slant amaplanga athambileyo- sebenzisa imiqolo emi-2, tyibilikisa amaplanga anzima- sebenzisa imiqulu emi-2 ukuya kwa-4
Irola umzobo mqengqeleki
Isetyenziselwa ukuzoba ngocingo lweenkozo zamaphepha
Eli nqaku linokuzikhethela
Egqithileyo umgca wemveliso ngamaplanga
Okulandelayo: yokuluka iinkuni umatshini exobukayo